फेरि अनसन बस्ने गाेविन्द केसीकाे चेतावनी, यस्ता छन् माग - ramechhapkhabar.com
फेरि अनसन बस्ने गाेविन्द केसीकाे चेतावनी, यस्ता छन् माग
डा. गोविन्द केसीले विभिन्न माग राख्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वी रुकुमबाट एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसनको चेतावनी दिएका हुन् । उनले खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले अधिकारीलाई उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने, बीपी प्रतिष्ठान धराका पदाधिकारीलाई बखाृस्त गरी आयोग बनाएर छानबिन सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनेका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र यसअघि भएका सहमति पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्ता छन् केसीले राखेका मागहरु
मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।
बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् ।
सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिश्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।
विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् ।
२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् ।
हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।
यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् । साभार : नेपाल प्रेस